Bogga ugu weyn 10 Shaqooyinka TEFL ee ugu Lacagta Badan 2022
Isha sawirka: www.canvapro.com
Baridda Ingiriisiga dibedda ayaa si dhakhso ah u noqonaya shaqo aad u faa'iido badan. Waxay qofka siisaa fursad uu wax ku baro oo lacag ku sameeyo inta uu adduunka ku safrayo. Waxaa jira fursado badan oo TEFL ah sanadka 2022, taas darteedna, waxaa muhiim ah in la ogaado shaqooyinka TEFL ee ugu mushaarka badan halkaas.
Shaqooyinkan inta ay ku badan yihiin dibadda waxay u baahan yihiin mas'uuliyado gaar ah kuwa doonaya inay macallimiin ka noqdaan halkaas. Shuruuddu waxay ka koobnaan kartaa mid haysta shahaado jaamacadeed ilaa inuu noqdo macallin Ingiriis ah oo ku nool magaaladiisa, ama inuu helo shahaadada TEFL.
In kasta oo qaar ka mid ah ummadahan ay kaa rabaan inaad haysato dhammaan shahaadooyinka lagama maarmaanka ah sida kor lagu sheegay, kuwa kalena ma laha.
Si kastaba ha noqotee, si loo kordhiyo fursad kasta oo soo bixi karta, haysashada shahaadooyin badan intii suurtagal ah ayaa noqon doonta sharadkaaga ugu fiican.
Markaad intaas tidhi, akhri si aad u hesho shaqooyinka TEFL ee ugu mushaarka badan.
Waa maxay TEFL?
Sida laga soo xigtay Akademiyada Caalamiga ah ee TEFL, “TEFL” waa soo gaabinta Barista Ingiriisiga oo ah Luuqad Shisheeye, ama si fudud, barashada luqadda Ingiriisiga ee dadka aan ku hadlin.
Waxa kale oo loo yaqaanaa Barista Ingiriisiga Ku -hadlayaasha Afafka Kale (TESOL), Baridda Luqadda Ingiriisiga (ELT), iyo baridda ESL (Ingiriisiga oo ah Luqad Labaad).
Goobta TEFL/TESOL waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah beeraha waxbarasho ee ugu dhaqsiyaha badan adduunka, waxayna soo bandhigaysaa kumanaan fursado xirfadeed oo aad u wanaagsan barashada ingiriiska dibada dhammaan daafaha dunida dadka af Ingiriiska ku hadla iyo kuwa si fiican u yaqaan ee qaata shahaadadooda TEFL/TESOL.
Hoos waxaan ku taxaynaa shaqooyinka TEFL ee ugu mushaarka badan.
Intee in le'eg ayay Macallimiinta TEFL helaan?
Ma jiro qorshe mushahar ama qorshe mushahar oo gaar ah oo loogu talagalay dadka wax ku bara Ingiriisiga dalalka aan Ingiriiska ku hadlin. Dakhliga macallimiintani wuxuu aad ugu tiirsan yahay waddanka ay wax ka barayaan.
Sidaa darteed, mushaharka macallinku wuxuu noqon karaa ugu yaraan $ 600 USD bishii ilaa ugu badnaan $ 4,000 USD! Sababtoo ah waddan kasta wuxuu leeyahay filashooyin waxbaris oo kala duwan, iyo dhererka heshiiska, waxay sidoo kale bixiyaan mushahar kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, goobtu ma aha waxa kaliya ee go'aaminaya waxa macallinku ku kasban lahaa barashada Ingiriisiga dibedda.
Arrimo kale oo qaarkood waxaa ka mid ah kuwan soo socda;
Tan waxaa lagu sameeyaa dhammaan goobaha shaqada, oo kaliya maahan macallimiinta TEFL. Qof kasta oo leh shahaadooyin ka wanaagsan inta badan wuxuu kasbadaa wax badan. Tani waa sababta oo ah waxaa la filayaa in macallinka leh shahaadooyin sare uu wax badan siin karo ardaydiisa. Intaa waxaa sii dheer, mid leh aqoonsi ka wanaagsan sida caadiga ah wuxuu galaangal u leeyahay dalabyo shaqo oo ka wanaagsan kuwa kale oo leh aqoon yar.
Sidaa darteed, si ay shaqada ugu sii hayaan, waxay u baahan yihiin inay farxaan. Sidaa darteed, adiga oo ah qof raadinaya shaqo TEFL, waxaad kordhin kartaa kartidaada kasbashada adoo kordhinaya shahaadooyinkaaga.
Akhri: Shaqooyinka Macallimiinta Ugu Mushaharka Badan 10 -Ka Sare
Arrin kale oo go'aamisa inta aad ku kasban karto shaqada TEFL waa:
Nooca Dugsiga Aad Wax Ku Barto
Meesha aad ka shaqayso waxay saamayn ku yeelan kartaa dakhligaaga. Haddii uu yahay dugsi dowladeed, waxaa laga yaabaa in lagu siiyo lacag ka fiican haddii iskuulkaas uu ka helo maalgelin badan dowladdooda. Tani inta badan waxay ku xiran tahay meesha aad isku aragto inaad tahay macallin TEFL.
Dhanka kale, meelaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad hesho mushahar ka fiican haddii aad u shaqayso hay'ad gaar ah. Sababtoo ah ururada noocaas ahi waxay xor u yihiin inay macaamiishooda ka qaadaan wax kasta oo ay u arkaan inay ku habboon yihiin, sidaas darteedna waxay awoodaan inay bixiyaan wax badan.
Arrin kale oo go'aamisa haddii shaqooyinkaagu yihiin shaqada TEFL ee ugu mushaarka badan waa;
Heerkee ayaad Bareysaa?
Haddii aad fursad u leedahay inaad qandaraas la gasho hay'ad sare, oo noqon karta jaamacad ama dugsi ganacsi. Fursadaha ayaa ah, in lagu siin lahaa lacag ka badan qof wax bara carruurta ku jirta dugsiga hoose, ama xarunta luqadda bulshada.
Sidee Mushaharku Isbarbar Dhigaa Qiimaha Nolosha?
Waxa qofku kasbado khasab ma aha inuu go'aamiyo inta lacag ee aan la isticmaalin ee laga yaabo inay leedahay. Maadaama aad tahay macallin TEFL oo ah waddan shisheeye, qiimaha noloshaada ayaa go'aamiya tan. Goobtaaduna waxay go'aamisaa qiimaha noloshaada.
Tusaale ahaan, waddamada Laatiin Ameerika waxaa laga yaabaa inay bixiyaan wax ka yar (qiyaastii $ 600- 1000 USD bishii), laakiin markaad tixgeliso qiimaha hoyga halkaas, dhib badan ma noqon doonto.
Dhinaca kale, mushahar sare oo laga kasbaday Japan kuma sii fogaan lahayd magaalo qaali ah sida Tokyo- dabcan mooyaane, loo -shaqeeyahaagu wuxuu ku siiyay guri bilaash ah heshiiskaaga.
Miyaad Sameyn Kartaa Barashada Nolosha Ingiriis Dibedda?
Jawaabtu waa haa! Si kastaba ha ahaatee, waa inaad tixgelisaa yoolalkaaga dhamaadka. Ma waxaad raadinaysaa meesha iyo sida loo sameeyo ku filan oo aad u safarto? Ama waxaad raadineysaa inaad badbaadiso xoogaa lacag dhab ah. Markaad haysato tiradan, waa inaad tixgelisaa qiimaha nolosha ee aaggaas iyo xirmada mushaharkooda.
Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato halka ujeeddooyinkaagu u badan yihiin in lagu gaaro.
Xusuusnow, waxaad u noolaan lahayd sida dadka maxalliga ah oo aad ka qayb qaadan lahayd ku dhawaad ​​dhammaan waxyaabaha aad samayso. Waa inaad la qabsataa qiimayaal kala duwan, mid sare ama mid hoose, xagga cuntada, dharka, hoyga, iyo madadaalada, ama xitaa kharashyada caafimaadka.
Tani waa sababta ay tahay inaad sameyso dadaal gaar ah oo ku saabsan goobta(yada) aad dooratay, si aad u ogaato waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad Ingiriiska ugu barato dibadda.
Hoosta, waxaan ku qori doonaa shaqooyinka TEFL ee ugu mushaharka badan.
Shaqooyinka TEFL ee ugu Lacagta Badan
Annagoo ka jawaabnay dhowr su'aalood oo ku saabsan TEFL, waxaan hadda fiirin doonnaa qaar ka mid ah shaqooyinka TEFL ee ugu mushaarka badan.
1. Imaaraatka Carabta US $ 3,500 - 5,000 bishii
2. Jabaan US $ 2,200 - 5,000 bishii
3. Sacuudi Carabiya US $ 3,000 - 4,000 bishii
4. Kuweyt US $ 2,600 - 4,000 bishii
5. Cumaan US $ 2,000 - 3,500 bishii
6 Taiwan US $ 2,000 - 2,400 bishii
7. Kuuriyada Koofureed US $ 1,600 - 2,000 bishii
8 Shiinaha US $ 1,500 - 2,000 bishii
9. Vietnam US $ 1,000 - 2,000 bishii
# 1. Imaaraadka
Qaranka saliidda hodanka ku ah ayaa bixiya shaqooyinka ugu mushaharka badan TEFL ee aad heli karto, waana tan sababta aad macallimiinta ugu soo qulqulayso dhulka.
Xidhmada mushaharkoodu waxay u dhaxaysaa US $ 3,500 iyo US $ 5,000 bishii.
Si kastaba ha ahaatee, tani ma imanayso iyada oo aan la helin shuruudo gaar ah oo ay ka mid yihiin; waayo -aragnimo u leh baridda iyo shahaado si wax loogu baro dalka hooyo.
Haddii aad ku xiran tahay UAE, waxaad ka heli doontaa waxqabadyo badan iyo waayo -aragnimo dhaqameed si aad ugu raaxaysato.
Haddii ay jirto meel ay tahay inaad rajaynayso inaad ka shaqeyso shaqooyinka TEFL ee ugu mushaharka badan, Japan waa inay ku jirtaa liiska. Macallinka TEFL ahaan ee Japan, uma baahnid xitaa shahaadada TEFL si aad wax u barato. Si kastaba ha ahaatee, waa suurad wacan.
Haddii aad ku xiran tahay Japan, isu diyaari inaad ku raaxaysato muuqaalka quruxda badan maadaama Japan ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee laga shaqeeyo. Intaa waxaa dheer, macallimiinta EFL waxay ku raaxaysan doonaan dhaqanka hodanka ah, ubaxa cherry, xafladaha, iyo cuntada aadka u fiican.
Haddii aad nasiib leedahay, cida aad u shaqayso ayaa daryeeli doonta duulimaadkaaga iyo hoygaaga. Kani wuxuu dul saaran yahay $ 3,000 bishiiba mushaharka oo leh faa'iidooyin kale.
#3. Sacuudi Carabiya
Si aad halkan wax ugu barato, waxaad u baahan tahay waayo -aragnimo iyo ESL -ga iyo shahaadada waxbaridda. Inkastoo jagooyinka qaarkood, uma baahnid shahaado. Mushaharku wuxuu u dhexeeyaa US $ 3,000 - US $, 4000 bishii.
Akhri: 10ka Maamule Ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka
Kuwait waxaa ku yaal dugsiyo badan oo caalami ah. Tan, fursado badan oo shaqo ayaa loo heli karaa macallimiinta. Magaalada waa mid aad loo casriyeeyay oo macalimiintu waxay kasban karaan ilaa US $ 2,600 bishii.
Sida dhammaan waddamada kale ee GCC, macallimiinta waxaa laga rabaa inay haystaan ​​shahaadada TEFL iyo khibrad.
Cumaan waa mid ka mid ah dhaqalaha carbeed ee sida xawliga ah u koraya waxayna horumar badan ka heshay waxbarashada. Si aan ula qabsano dunida inteeda kale, xiisaha barashada Ingiriisiga ayaa aad u sii kordhaya.
Sidaa darteed macallin Ingiriis ah oo Cumaan ah, waxaad ka mid noqon doontaa hormuudka. Mushaharku wuxuu gaari karaa US $ 2,000 ilaa US $ 3,500 bishiiba, oo ay kujirto qiimo jaban oo nolosha ah.
Mushaharka Taiwan wuxuu aad ugu eg yahay Kuuriyada Koonfureed oo macallimiintu ka heli karaan US $ 2,000 - US $ 2,400 bishii. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha nolosha ee Taiwan wuu hooseeyaa marka la barbar dhigo Kuuriya, taas oo ka dhigaysa lacagta badbaadinta mid fudud.
Waxaad heli kartaa shaqo laga bilaabo baridda xannaanada illaa jaamacadda, dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Oo, uma baahnid shahaadada TEFL si aad wax ugu barato Taiwan.
Kaliya waxaad u baahan tahay shahaado jaamacadeed si aad u codsato shaqooyinkan TEFL ee ugu mushaarka badan. Si kastaba ha noqotee, waad ka faa'iidaysan kartaa codsadayaasha kale haddii aad leedahay khibrad waxbaris.
Kuuriyada Koonfureed waxay leedahay baakad la mid ah oo la siiyay macallimiinta Ingiriiska ee Japan. Dalkan ayaa dalxiisayaasha ka yar Japan.
Macallimiinta ESL ee Kuuriyada Koonfureed waxay kasban karaan mushahar ku dhow US $ 2,000 bishii, badiyaana waxaa ku jira hoy iyo duulimaad.
Shahaadada TEFL iyo shahaadada bachelorka ayaa looga baahan yahay inay ku baraan Ingiriisiga Kuuriyada Koonfureed.
Tani waa goob kale oo loogu talagalay shaqooyinka TEFL ee ugu mushaarka badan.
Shiinaha waa shaqo -bixiyaha ugu weyn ee macallimiinta ESL -ka adduunka. Qiimaha hoose ee nolosha iyo mushaharku wuxuu u dhexeeyaa US $ 1,500 illaa US $ 2,000 bishii taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu habboon macallimiinta Ingiriiska.
Macallinka Ingiriisiga ee Shiinaha wuxuu u shaqayn karaa shirkad gaar loo leeyahay ama iskuul dawladeed. Ardayda rajaynaysa inay sii wataan tacliinta sare ee Shiinaha waxay isticmaali karaan xoogaa xirfado Ingiriis ah.
Akhri: Darawalada Baabuurta ugu Mushaharka Badan Caalamka | 10 Dalalka ugu fiican
Haddii aadan lahayn khibrad baris oo hore laakiin aad haysato shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo shahaadada TEFL, waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga Fiyatnaam.
Wadanku wuxuu arkay baahi weyn oo loo qabo macalimiinta ESL dhawrkii sano ee la soo dhaafay.
Mushaharku ma badna marka loo eego dalalka kale ee liiska ku jira laakiin qiimaha noloshu waa raqiis. Mushaharku wuxuu u dhexeeyaa US $ 1,000 ilaa US $ 2,000 bishii. Macallimiintu waxay aad uga heli doonaan Fiyatnaam.
# 10. Chile
Latin America waxaa laga yaabaa inaysan ahayn meesha ugu fiican ee macallimiinta TEFL, tanina waa sababta oo ah xirmada mushaharkoodu aad bay u yar tahay. Xaaladaha qaarkood, deegaanku wuxuu kaa filayaa inaad si lacag la'aan ah wax u barato si mutadawacnimo ah.
Si kastaba ha ahaatee, macalimiinta ayaa shaqaalaysiiyay Premier TEFL waxay filan kartaa inay sameyso ugu yaraan $ 985 bishii, oo la mid ah celceliska mushaharka billaha ah ee macalinka reer Chile, oo kasbaday booskeeda mid ka mid ah shaqooyinka waxbaridda Ingiriisiga ee ugu mushaarka badan dibadda.
Macallimiintu waxay kaloo samayn karaan wax badan haddii ay shaqeeyaan saacado badan. Mushaharkan ayaa ah mid aad ugu filan in lagu daboolo kharashaadka nolosha aasaasiga ah ee Chile ka -qaybgalayaashu waa u xor inay ku kabaan dakhligan umeerin khaas ah iyo shaqooyin kale oo dhinac ah.
Perks: Barnaamij sumcad sare leh oo caalami ah, hoy u jihayn lacag la'aan ah
Saacadaha mushaharka: ~ $ 1000+ bishii
Magaalooyinka caanka ah: Valparaiso, Santiago
Dad badan ayaa xiisaynaya in ay wax ku baraan Ingiriisi dibadda arrimo samafal ah ama si ay u helaan in ay u safraan, qaar ka mid ah oo kaliya qaar ka mid ah oo kaliya ayaa og in mid ka mid ah uu sidoo kale samayn karo lacag marka la samaynayo.
Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu ka hadlay shaqooyinka TEFL ee ugu mushaharka badan dalalku si qofku uga faa'iidaysto fursadda ah inuu Ingiriisiga wax ku baro dibadda.
Shaqooyinka Macallimiinta Ugu Mushaharka Badan 10 -Ka Sare
10ka Kulliyadood ee ugu Qalinjabinta Badan Adduunka
Shaqaalaha Bulshada ee ugu Mushaharka badan | 10ka Xirfadood ee ugu Wanaagsan Shaqada Bulshada
10 -ka Xidig Ee Ugu Lacagta Badan Adduunka
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato Khamaarka Filibiin
Faallooyinka Clixsense 2022: Intee in le'eg ayaan ku samayn karaa maalin | Sharci ama Fadeexad
15-ka Waaxood ee ugu Mushaarka Badan
Haddii aad waydiiso tiro badan oo caruur ah waxay rabaan inay noqdaan markay koraan, waxaad…
Waa Maxay Caymiska Shaqo La'aanta Iyo Sida Loo Gudbiyo NJ
Caymiska shaqo la'aanta (UI), oo badanaa loo yaqaan dheefaha shaqo la'aanta. Waa nooc ka mid ah caymiska ay dawladdu maalgeliso oo bixiya…
10 Shaqooyinka Heerka Gelitaanka Lacag-bixinta ugu sarreeya ee 2022
Anagoo raadinayna inaan helno shaqo macna leh sanadkan, waxaan helnay tiro Shaqooyin heer Geli ah oo Lacag-bixin ah. Ma aha…
Dab -demiyeyaasha Tabaruca ah Lacag ma helaan? Waxaan rabaa inaan noqdo mid
Hadda miyaad ka fekereysaa inaad noqoto dab-demis iskaa wax u qabso ah oo aad ku wareersan tahay inaad hesho wax yar iyo in kale.
20 Shaqooyinka Ugu Lacag Badan Tamarta | 2022
Shaqooyinka tamarta waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan adduunka maanta oo leh heerka kobaca sare. Waa…
20 Shaqooyin Oo 20 Saacadood Bixiya 2022 | Lacag Degdeg ah
Marna maan lahayn fikrad ah inta aan ka heli karo dhaq-dhaqaaq dhinac ah. waa inaan...